မွေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့နေရသော အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ သန္ဓေသားအရွယ် ပုံမှန်ထက် ပို၍ကြီးနေခြင်း၊ သန္ဓေသား၏အနေအထားပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ တင်ပဆုံရိုးသေးနေခြင်းနှင့် မွေးလမ်းကြောင်းရှိ ပြဿနာများဖြစ်သည်။ သန္ဓေသား၏အနေအထားပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်သော ပခုံးတစ်ဆို့နေခြင်း(shoulder dystocia)တွင် သန္ဓေသား၏ ရှေ့ပခုံးသည် မိခင်၏ဆီးခုံရိုးအောက်မှ အလွယ်တကူမထွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တင်ပဆုံရိုးသေးစေသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းနှင့် နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဗိုက်တာမင်ဒီချို့တဲ့ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ အပျိုဖော်ဝင်စမိန်းကလေးများတွင် တင်ပဆုံရိုးကြီးထွားမှု မပြီးပြည့်စုံသေးသောကြောင့် ပိုဖြစ်လေ့ရှိသည်။ မွေးလမ်းကြောင်းရှိ ပြဿနာများမှာ မိန်းမကိုယ်၏ ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းတချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို ဖြတ်ခြင်း(female genital mutilation)နှင့် ကင်ဆာကျိတ်များကြောင့် သားအိမ်လမ်းကြောင်း(vagina)နှင့် မိန်းမကိုယ်နှင့်စအိုဆက်သည့်နေရာ(perineum) ကျဉ်းနေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပါတိုဇယား(partograph)ကို အသုံးပြု၍ မီးဖွားခြင်း၏တိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောပြဿနာများကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ပါတိုဇယားနှင့် ခန္ဓာကိုယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် မွေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့နေခြင်းကို သိနိုင်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ Education material for teachers of midwifery : midwifery education modules (PDF) (2nd ed.)။ Geneva [Switzerland]: World Health Organisation။ 2008။ pp. 17–36။ ISBN 9789241546669။
↑ Education material for teachers of midwifery : midwifery education modules (PDF) (2nd ed.)။ Geneva [Switzerland]: World Health Organisation။ 2008။ pp. 38–44။ ISBN 9789241546669။
↑ Education material for teachers of midwifery : midwifery education modules (PDF) (2nd ed.)။ Geneva [Switzerland]: World Health Organisation။ 2008။ pp. 45–52။ ISBN 9789241546669။
↑ Education material for teachers of midwifery : midwifery education modules (PDF) (2nd ed.)။ Geneva [Switzerland]: World Health Organisation။ 2008။ pp. 89–104။ ISBN 9789241546669။
↑ Usha၊ Krishna (2004)။ Pregnancy at risk : current concepts။ New Delhi: Jaypee Bros.။ p. 451။ ISBN 9788171798261။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မွေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့နေခြင်း&oldid=720176" မှ ရယူရန်
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။